Guddoomiyaha degmada Afgooye, C/llaahi Axmed Iidey oo hadal ka jeediyay doodda ayaa sheegay in ciidamada ammaanka iyo qaybaha kale ee blushada ay si wadarji ah uga shaqeyn doonaan xoojinta ammaanka degmada.
Sidoo kale, guddoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellada hoose, Cumar Maxamuud Cilmi oo isaguna hadlay ayaa sheegay in bulshada gobolka ay diyaar u yihiin inay iska kaashadaan adkeynta nabadgelyada ka jirta gobolka.
"Far kaligeed fool ma dhaqdo, bulshada gobolka ku nool waa inay si wadajir ah isaga kaashadaan nabadda iyo inay mar kale dib ugu soo noqon kooxihii laga saaray," ayuu yiri mas'uulka u hadlay gobolka oo u mahadceliyay hay'adda CCD.
Ciise Axmed Cumar oo ah guddoomiyaha hay'adda CCD oo isaguna hadal goobta ka jeediyay ayaa ku booriyay bulshada degmadaas ku nool inay ka faa'iideystaan nabdda ay haystaan iyagoo ku cibro qaadanaya dhibaatadii ay ku hayeen kooxihii nabad-diidka ahaa ay iska kaashadaan sidii ay nabadda ku xajisan lahaayeen.
"Waxaan aad ugu faraxsanahay abaabulka iyo farxadda idinka muuqata, waxaana ballan-qaadayaa in hay'adda CCD ay kordhineyso seminaarada ay degmadan ku qabanayso," ayuu yiri guddoomiyaha haya'dda.
Madaxa haweenka gobolka Banaadir, Jawaahir Baarqab oo iyaduna doodda hadal ka jeediysay ayaa sheegtay in shacabka ku nool gobollada Banaadir iyo Shabeellada hoose ay yihiin walaalo, iyadoo tilmaantay in bulshada labada gobol ay dano fara badan ka dhexeeyaan.
"Bulshada degmada Afgooye oo runtii ah bulsho fac weyn, waxaan aad iyo aad ugu faraxsan-nahay haybadda ka muuqata ka qayb-galayaasha dood-cilmiyeedka," ayay tiri Jawaahir Baarqab oo dhinaca kale ku boorisay shacabka degmadaas inay la shaqeeyaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM si ammaanka ay u adkeeyaan.
Jan. Ibraahim Yaroow oo ka mid ahaa saraakiisha ka qayb-galay doodda ayaa isna hadal uu jeediyay ku sheegay in nabadda ka dhalatay degmada Afgooye loo huray dhiig iyo dhaqaale, sidaa daraadeedna loo baahan yahay in bulshada degmada iyo ciidamada dowladda si wadajir ah isaga kaashadaan in kooxaha fara ku tiriska ah ee ku dhuumaaleysanaya degmada loo soo qabto isla markaana gacanta ciidamada loo soo geliyo.
Ugu dambeyn, waxaa doodda ka hadlay guddoomiyaha degmada Wardhiigley, Deeqo C/qaadir Axmed iyadoo doodda ku tilmaantay mid lagu wacyi-gelinayay shacabka ku nool degmadaas oo dhawaan ay ciidamada DKMG ah iyo kuwa AMISOM dagaal uga qabsadeen Xarakada Al-shabaab.
Iyadoo dooddan looga hadlayay nabadda lagu qabtay degmada Afgooye ayaa waxay haddana dadka degmadaas ku nool ka cabanayaan dhac ay u geystaan ciidamada dowladda KMG, waxayna qaarkood inay nabad haysteen intii ay Al-shabaab ka talinaysay degmada.